Saynisyahanno Ogaaday Sababta Dadka Qaar Habeenkii Xilli Dambe u soo Jeedaan - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Saynisyahanno Ogaaday Sababta Dadka Qaar Habeenkii Xilli Dambe u soo Jeedaan
Haddii aan hurdo hore kuu qaban habeenkii oo aad soo jeedo inta badan, waxa sababtaa loo aaneeyaa hidde-sidayaashaada (Genes). Cilmi-baadhis cusub ayaa lagu ogaaday in dhecaanka DNA oo isbeddel (Mutation) ku dhacaa uu keeno in qofku habeenkii soo jeedo.
Saynisyahannada cilmi-baadhistan sameeyey ayaa sheegay in dadku ku kala duwan yihiin hidde-sidayaasha (Gene) la xidhiidha in qofku caadaysto inuu habeenkii soo jeedo amma xilli dambe seexdo.
Dadka xaaladdan ku sugan waxa ay soo jeedaan waqti dambe oo jidhkoodu xaataa u diyaargaroobay inuu seexdo, balse aakhirka waxay qaadaan xannuunnada maskaxda ku dhaca, halka ugu dambayntana way hawlgabaan.
Cilmi-baadhistan oo ay samaysay Jaamacadda Rockefeller University oo ku taal magaalada New York ee dalka Maraykanka, ayaa dad ay baadhaayeen oo xaaladan la soo daristay ku tijaabiyey muddo laba toddobaad ah inay joogaan qol ay shaybaadh ahaan u isticmaalaayeen, iyadoo laga qariyey dhammaan wixii ay waqtiga ku garan lahaayeen, cuntada iyo hurdaba.
‘Dheecaanka uu soo saaro qanjidhka Pineal Gland ee keena u noqda inuu qofku seexdo ee la yidhaa Melatonin amma N-acelevels waxa uu bilaabaa in jidhku hurdo dareemo 9 amma 10 habeennimo dadka badankooda, balse dadka xaalada hurdo la’aan ku dhacdo sidan maaha oo waxa uu yimaada labada amma saddexda habeennimo,” ayuu yidhi Dr. Michael Young oo ah Madaxa Shaybaadhka Jaamacadda Rockefeller.